Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 06/11/2020)
Ah, Siwizarendi, nyika yakanaka nerunyararo yakagara zvakanaka pakati Itari, Furanzi, uye Jerimani. Zvakakosha kushanya kuti uone kuti nei Switzerland ichienzaniswa seimwe yenyika dzinofara kwazvo pasirese. Saka unofunga kuti kana uchifunga 'Siwizarendi'? Ndiri guessing sinou yakavharwa nenhongonya, chizi, uye chokoreti. Pachava nenguva yakawanda chocolate fondue musi Swiss wako vacay, asi iva nechokwadi kuti zvinosanganisira zvose tsika, dzinongoitika, uye nhoroondo inotaura nyika iyi ine kupa. Kubva paakaita chitima Vatasvi uye gomo treks kuti rushaya-anodonha mapurani, Switzerland ine chinhu chokupa mumwe mhando mufambi mumwaka ose. Ngatitaurei kuputsa dzimwe vanofanira-kaksi nokuda kwenyu rwendo kuSwitzerland.
Fondue ndiye imwe yakakurumbira ndiro kubuda Switzerland, uye ichi hachisi tsaona. Vanhu vave kudya yanyungudiswa chizi kubva zvaiita hari amakore kumadokero chiFrench chikamu Switzerland. zvisinei, ari 1930s neSwiss Cheese Union kutengeswa rinopikisa dhishi ichi munyika nepasi rese, kuzivisa zviri National nezvokudya Switzerland senzira kutengesa nyika overabundance pamusoro chizi. Uye tinofara vakaita, uyo haadi yakanyauka chizi uye chingwa? Peya fondue wako rakaoma chena waini, uye kuva nechokwadi kwete nekaviri Dip!